Mozilla Firefox inoisa imwe chipikiri mubhokisi reFlash Player | Linux Vakapindwa muropa
Zvinotaridza kuti Flash Player yasara zvishoma, Mozilla yakafunga kuisa HTML5 seye default vhidhiyo mutambi, kunyange HTML5 ichingotsigira 720p resolution.
Sezvo isu tichiziva kwazvo, Adobe Flash Player ine mazuva ayo akaverengwa, isu takatotaura nezve maburi ayo makuru ekuchengetedza uye kuti yaive software mairi bugs, kuvhara kusingatarisirwi uye kushandiswa kwakanyanya kwaiwanzoitika of RAM.
Imwe yemakambani aipesana neFlash Player yaive Mozilla, yatove mubrowser Firefox 39 vakaratidza yambiro yekuchengetedza nezve njodzi dzeFlash Player, yaenda nhanho kumberi uye mune yayo 40th vhezheni, izvo zvangobva kubuda, hndamisa HTML5 mutambi seye default player yemavhidhiyo masosi senge YouTube.
Iye HTML5 mutambi kusvika parizvino arikupa Flash Player zvakanyatsonaka, asi pane dambudziko rekuti kune vanonyanya kudhira vashandisi zvinogona kutungamira kunyunyuto, HTML5 paYouTube ine resolution yepamusoro ye720p, isingaenderane ne1080p resolution, iyo inotsigirwa neFlash Player.
Kunyangwe kune vedu vazhinji hazvina basa zvakanyanya kuti resolution ndeye 720p chete, kune vazhinji vasina chokwadi uye vanodzvinyirira vashandisi zvinogona kutyisa uye zvinogona kureva kurasikirwa kwevashandisi vanoshandisa Firefox, saka tinovimba kuti mune dzimwe shanduro dzeFirefox HTML5 inowedzerwazve kuitira kuti ipedze kutsigira resolution iyoyo usinga fanirwe kuitisa nharo chirongwa cheAdobe.
Kunyangwe Mozilla ichikurudzira mashandisiro ayo, isu tichiri kukwanisa kurodha Flash Player yeFirefox uye nekuimisa seye default player. Zviite panjodzi yako wega uchifunga zvakakomba zvekuchengetedza iyo ine Adobe Flash Player.
Mune mawonero angu, zvinosuwisa kuti Flash Player iri kusangana nenguva idzi, kunyange hazvo izvozvi zvishandiso zvinokwanisa kumhanyisa mavhidhiyo nemitambo zvisina Flash uye kuti pane izvi zvikanganiso zvekuchengetedza, Ini handigone kubatsira asi ndichifunga zvinofadza nguva dzakanaka dzaisazoitika pasina Adobe Flash PlayerKuti tipe mienzaniso mishoma, tinogona kutarisa mavhidhiyo, kutamba mitambo yeFlash mubrowser kuchikoro chesekondari, kana kutogadzira mifananidzo.
Kana Adobe ikasatora hang yacho yacho nekukurumidza, Flash Player yasara nenhau mbiri dzakasara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Mozilla Firefox inoisa imwe chipikiri mubhokisi reFlash Player
Flash player yaigara ichindikonzera matambudziko paGNU / Linux. Ndakazvivenga. yakamedza zviwanikwa senge kupenga (yaisatombogona kushandisa yakazara skrini), dzimwe nguva yaisungirira bhurawuza, tisingataure kuti kwenguva yakareba ivo havana kutipa rutsigiro, uye paive nenzvimbo dzaishungurudza flash (dzaive dzakanyanya rinorema).
Tariro chete yandaive nayo yaive GNASH (kare ikako kunyangwe yaive isina kukura, zvaive nani pazere yakazara pane flash) uye SWFDec (iyo yakashanda zvirinani kupfuura GNASH). Ini ndinorangarira kumashure ipapo munhu wese aiti kushandisa izvo dzimwe nzira kwaive kubva kuTaliban.
Kana zvirizvo iko chokwadi chekuchishandisa nekumhan'ara zvikanganiso zvaive zvakakwana kubatsira iwo mapurojekiti uye kunakirwa newebhu isina adobe flash mune isiri kure kure ramangwana!
Uye zvino pakupedzisira !! pakupedzisira inoenda !!!, Hareruya !!!
* ONA: Hapana kushayikwa kwembwa dzinoti "Steve Jobs akasara achigunun'una nezve flash uye ikozvino ave kuenda, mabasa anga ari muoni."
Ivo havagone kuve mamwe mapenzi. Flash yaigara iri musoro uye zvakapusa adobe haina kumusunungura.
FLASH NDINOKUVENGA UYE HANDI KUMWE NDINOKUSHAYA KUTI UYE, WEBHU ICHAVA NZVIMBO NZVIMBO PASI PAKO.
NDINOVIMBA KUTI MAPENYU ANODYA KUNE ZVAKANAKA MUGUVA RAKO UYE HAUZVIMBUDZE.
Kwaziwai! = D
Ini ndichangobva kuyedza firefox 40.0 ine vhidhiyo yeYouTube mu1080p uye inobvumira iyo sarudzo. PaMac hongu, ini handizive paLinux.
Ndedzipi nhema dzekunyepedzera ... Ndiyo YouTube here zvino inoridza mavhidhiyo muHTML5 nekumira, kwete firefox ...
Youtube inogadza html5 player nekukasira uye kana 1080p ikatambwa unongofanira kuona akasiyana hunhu hwevhidhiyo.
kukunda masvingo akadaro
Citizen: Kune firefox yangu kana ndikaramba ndichitamba youtube flash mune vhezheni 39.0.3
Pindura Victor Paredes
Zvakanaka, ini handizive kuti sei asi zvinongondisiya ndiri pa720, ine html 5 uye linux
Izvo zvinongoratidzika kwandiri ne360p uye 720p.
Ndinoda 480p !!!
Pindura kuna celsius
Ichokwadi, ini ndinoshandisa Firefox 40.0 paUbuntu 14.04 uye ini ndinogona kungotamba neidzo sarudzo uye kazhinji vhidhiyo izere zvizere uye kutamba kunomira, pane chero munhu anoziva nei?
Nehurombo, ndinofunga zvisinei nezvingaitwe neFirefox, hazvizove nyore kuti Flash inyangarike, handifunge kuti achiri muchipatara. Pachine zvinhu zvakawanda zvinoda Flash, kubva paSpotify webhu, kumavhidhiyo kubva kumapepanhau mazhinji edhijitari ... chokwadi ndechekuti zvinoita kunge zvisingaite inyaya yemwedzi, kana gore ... asi zvese zvichashanda Ndinofunga.